MacX MediaTrans, ny fomba haingana indrindra hanavotana ireo angona iPHone [Fahazoan-dàlana malalaka] | Vaovao IPhone
MacX MediaTrans, ny fomba haingana indrindra hanavotana ireo angona iPHone [Fahazoan-dàlana malalaka]
Te hanana programa amin'ny backups ho an'ny iPhone maimaim-poana? Ny fanombohana fitaovana Apple vaovao, toa ny iPhone 8 sy iPhone 8 Plus, Efa zava-misy io, fa vao mainka aza ny fahatongavan'ilay rafitra fiasa vaovao iOS 11, rafitra iray feno famoronana sy zava-baovao: rindranasa "Files" vaovao, fisehoana multitasking vaovao, fiasa "Drag & Drop", foibe fanaraha-maso nohavaozina tanteraka izay tena ilaina sy miasa kokoa, sns. Ary eto no ahafahanao manao backup MacX MediaTrans ho solon'ny fomba ofisialy.
Amin'ny zava-baovao be dia be, ara-dalàna ny fanirianao mankafy ny traikefa farany mety indrindra amin'ny iOS 11 amin'ny iPhone na iPad anao. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanananao a nomaniny ho solon'izay fenoy ny sarinao rehetra, ny horonan-tsary, ny mozika, ny boky sns, ary izay azonao atao Alefaso haingana sy haingana amin'ny iPhone vaovao na ny fitaovanao miaraka amin'ny iOS 11 napetraka avy hatrany.na. Ho an'ity dia manana iCloud sy iTunes izahay, na izany aza, misy safidy hafainganina sy haingana kokoa: MacX MediaTrans.
1 Ny safidy tsara indrindra amin'ny iTunes sy iCloud: MacX MediaTrans
2 Lafiny sy tombony lehibe amin'ny MacX MediaTrans raha ampitahaina amin'ny iCloud sy iTunes
3 Andramo maimaimpoana ny MacX MediaTrans ary reseo lahatra ny tenanao
4 Araraoty ny tolotra ary mahazoa MacX Transfer mandrapahafatiny amin'ny antsasaky ny vidiny
Ny safidy tsara indrindra amin'ny iTunes sy iCloud: MacX MediaTrans
Nandritra ny taona maro, Nanjary karazana "kitapo mifangaro" ny iTunes, ary na dia efa nodiovin'i Apple tamin'ny kinova farany aza, ity programa ity dia mbola mila fanavaozana lalina. Noho izany, maro ny olona mahita fa sarotra ny mampiasa azy, saingy, mino fa tena ilaina izy io, dia voatery mampiasa iTunes izy ireo mba hanaovana kopia voafafa na hamindra angona amin'ireo fitaovana iOS.
Ny sasany kosa etsy ankilany, tia mampiasa iCloud, ny sehatr'i Apple izay, na izany aza, dia manana fetra roa lehibe: voalohany, rehefa hamoaka ny iPhone izy dia manary ny backup feno farany fotsiny; ary faharoa, satria miankina amin'ny tambajotra WiFi, iCloud dia mety ho miadana sy mampahory.
Manoloana ireo vahaolana roa ananantsika ireo MacX MediaTrans, angamba ny safidy iTunes tsara indrindra ho an'ny Mac ahafahanao mitantana ny rakitra iPhone sy iPad mora foana sy haingana.
Lafiny sy tombony lehibe amin'ny MacX MediaTrans raha ampitahaina amin'ny iCloud sy iTunes
Amin'ity tabilao manaraka ity dia hitantsika ny tombony lehibe atolotray azy MacX MediaTrans raha ampitahaina amin'ny iTunes sy iCloud ho toy ny rafitra iray hitahiry sy hamindra ny mombamomba ny fitaovan'ny iOS anao:
Araka ny hitanao noho ny tabilao teo aloha, misy tombony maro azo raisina amin'ny alàlan'ny MacX MediaTrans hitahiry sy hamindra vaovao eo anelanelan'ny fitaovantsika iOS sy Mac:
Izy io dia manohana ireo karazana fisie mitovy amin'ny iTunes sy iCloud ary mamela antsika hanisy, hamafa ary hanova ny playlists toa ny programa Apple.
Haingam-pandeha kokoa izy io mamela ny famindrana sary hatramin'ny 100 amin'ny kalitaon'ny 4K ao anatin'ny 8 segondra monja.
Hahazo toerana fitahirizana ianao satria mamela ny famoretana ny fisie mba tsy dia mavesatra loatra izy ireo.
Azonao atao hamafa sary sy horonan-tsary amin'ny iPhone na iPad-nao, zavatra tsy azonao atao amin'ny iCloud na iTunes backup.
Azonao atao ampiasao ny iPhone-nao toy ny pendrive hitondra vaovao.
Ary afaka manao izany aza ianao mamorona feo namboarina.
Izany rehetra izany sy ny maro hafa, tsy misy fetra fitahirizana, tsy misy fetra endrika ary tsy misy fetra fitaovana.
Noho ireo antony rehetra ireo dia mora ny mieritreritra an'izany MacX MediaTrans no safidy tsara indrindra amin'ny iTunes sy iCloud handrindrana sy handefasana horonan-tsary, sary, mozika, ebooks, sns. eo anelanelan'ny iPhone, iPad, iPod touch ary Mac. Nefa mora kokoa kokoa aza ny mino raha andramanao maimaim-poana.
Andramo maimaimpoana ny MacX MediaTrans ary reseo lahatra ny tenanao
Ny ekipa MacX MediaTrans dia matoky tokoa fa ho tianao izy io ary manolotra anao a kinova fitsapana maimaimpoana sy miasa tanteraka. Mba hahazoana azy dia tsindrio fotsiny eto, ampidiro ny mailakao, ary hanomboka avy hatrany ny fisintomana.
Vantany vao tafapetraka amin'ny Mac-nao ianao, sokafy ny programa ary ampidiro ny kaody fampandehananan azonao tamin'ny mailaka. Manomboka amin'ity fotoana ity dia azonao atao ankafizo ny MacX MediaTrans tsy misy fetrany ary maimaimpoana tanteraka, na dia tsy afaka miditra amin'ny fanavaozana ho avy aza ianao. Aza matahotra anefa, satria mbola misy tsy ampoizina hafa ihany. Amin'izao fotoana izao, andramo ny kinova napetraka. Mba hanaovana izany dia ampifandraiso fotsiny ny fitaovana iPhone na iPad amin'ny Mac anao, ary ho fantatry ny MacX Transfer avy hatrany.
Izao dia mila mifidy izay safidy efa misy ianao, ary haingana sy mora ianao dia afaka mitantana ny rakitrao rehetra. Ohatra, nisafidy ny "Music Manager" aho. Ny MacX MediaTrans dia mizaha azy ho azy ny mozika rehetra ao amin'ny findaiko ary asehony ahy eo amin'ny efijery mba hahafahako mitantana azy araka izay itiavako azy. Azoko atao ny manefy ny làlana rehetra, mamorona sy manova ny playlist, na manodinkodina ny hira iray, mamafa azy, manampy azy amin'ny playlist, sy maro hafa. Tsotra toy izany.
Raha te-hahita ilay fitaovana miasa ianao dia ity misy horonantsary feno.
Araraoty ny tolotra ary mahazoa MacX Transfer mandrapahafatiny amin'ny antsasaky ny vidiny
Mahomby. Raha vantany vao nanandrana ny MacX Transfer ianao, ary raha tsy maharesy lahatra anao izy dia afaka manararaotra an'ity tolotra manokana ity mandritra ny fotoana voafetra ary azonao atao izany amin'ny alàlan'ny lisansa MacX Transfer for Mac amin'ny € 29,95 ihany fa tsy ny 59,95 € mahazatra. Fahazoan-dàlana ho an'ny Mac roa ity, fa afaka miditra amin'ny tolotra hafa amin'ny vidiny tsy mampino ihany koa ianao. Ho fanampin'izay, manana a Antoka miverina 30 andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » MacX MediaTrans, ny fomba haingana indrindra hanavotana ireo angona iPHone [Fahazoan-dàlana malalaka]
iOS 11 dia efa eo amin'ny 25% amin'ireo fitaovana tohanan'ny
Ny charger dia mifanaraka amin'ny famandrihana haingana ny iPhone 8, 8 Plus ary X